‘Vemabhizimisi tisangochema neCovid-19’ | Kwayedza
‘Vemabhizimisi tisangochema neCovid-19’
10 Jan, 2022 - 15:01 2022-01-10T15:51:47+00:00 2022-01-10T15:50:45+00:00 0 Views
VEMABHIZIMISI vokurudzirwa kuti vasangochema-chema nekuda kwekuvepo kwechirwere cheCovid-19 vachiti chiri kuvadzosera kumashure asi kuti vatsvage dzimwe nzira dzekusimudzira mabasa avo sezvo denda iri risingazivikanwe kuti richapera rinhi.
Kurudziro iyi yakapihwa nageneral manager wePacific Cigarette Company – VaItai Gift Watinaye – svondo radarika muHarare pamhemberero iyo yakaona kambani iyi ichiparura mhando itsva yefodya inoti Pegasus neBranson.
VaWatinaye vanoti kuuya kwakaita Covid-19 kwakambodzosera kumashure mabhizimisi mazhinji, kusanganisira ravo, asi vakaona kuti vakaramba vachingomirira kuti denda iri richapera, bhizimisi ravo raigona kutowondomoka zvachose.
Vanoti vakatora danho rekuvandudza bhizimisi ravo kuti rigoendeka zvisinei nekuvepo kwechirwere cheCovid-19 sezvo denda iri pasina anoziva kuti richapera rinhi.
Asi, vanoti vari kushanda vachitevedza matanho ose ekurwisa chirwere ichi.
“Kuuya kwakaita denda reCovid-19 kwakadzosera kumashure mabhizimisi mazhinji zvekuti vamwe vakatosvika pakutovhara. Isu basa redu tinoita tichitenga zvimwe zvinhu kunze kwenyika zvinoshandiswa mukugadzira fodya. Saka paye vanhu vaisatenderwa kufamba-famba zvisina tsarukano (lockdown), zvinhu zvatinohodha izvo zvaisimbouya mumavhiki maviri zvakange zvave kuuya kwapera kana mwedzi mitatu. Izvi zvakatombodzosera basa redu kumashure asi takaramba takashinga.
“Tichitarisa denda reCovid-19, chokwadi hakuna anoziva kuti richapera rinhi uye mangwana zvichafamba sei. Zvichireva kuti tikangomirira tichiti ichapera kuti tizotanga kuita basa, hapana zvatinenge tichiita nekuti tinorasikirwa nemikana yakawanda,” vanodaro VaWatinaye.
Vanoti Covid-19 yakafanana nedenda redzihwa rakambonetsa rekuSpain iro raizivikanwa nekuti Spanish flu nekudaro vemabhizimisi vanofanirwa kutotsvaga dzimwe nzira dzekushandisa panguva iyo zvinhu zvinenge zvakaoma.
“Hatizi zvedu vanamazvikokota munyaya dzezvehutano asi zviri kurakidza kuti denda iri harisi kuzopera nekuchimbidza. Saka tinotofanirwa kuona kuti tashanda takachengetedzeka,” vanodaro.